Fampandrosoana · Aogositra, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Fampandrosoana · Aogositra, 2018
Tantara mikasika ny Fampandrosoana tamin'ny Aogositra, 2018
Afrika Mainty24 Aogositra 2018
Sakafo an-dalambe ao Vietnam
Azia Atsinanana23 Aogositra 2018
Ahitana fanambarana kely mampikorontan-tsaina ireo mpankafy sakafo Vietnamiana an-dalambe ao anivontany Vietnamiana ao Hoi An ny lahatsoratra bilaogy iray tsy tokony heverina ho tsotra momba ny vary akoho (com ga).
Japana : Topimaso Kely Amin'ny Teknolojia Ekolojika Japoney
Japana21 Aogositra 2018
Nanangana drafitra fanentanana ho fampiroboroboana ny fangatahana kojakojan-tokantrano mandeha amin'ny herinaratra mitsitsy angovo ny governemanta japoney noho ilay rafitra 'éco-point'. Ny tanjona dia ny hamerenana indray ny sarin'i Japana, foiben'ny protocole de Kyoto, ho tahaka ny firenena mampiasa teknolojia manaja ny tontolo iainana.
Frantsa21 Aogositra 2018
Manana olana ara-pisiana miseho amin'ny endrika isankarazany ireo blaogera Ogandey. Nanomboka tamin'ny volana janoary ny fandinihantena eny anivon'ireo Blogren, raha toa izy ireo nanomboka nifampiantso, rehefa injay marobe ireo blaogera nanohitra ny famoronana ny Ora Mamalifaly (Happy Hours) ho an'ireo Blaogera ao Oganda sy ireo Loka ho an'ny Bilaogy Tsara...
Albania16 Aogositra 2018
Eoropa Afovoany & Atsinanana14 Aogositra 2018